Mofon’aina – ALATSINAINY 16 OKTOBRA 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALATSINAINY 16 OKTOBRA 2017
14 Dia noraisin’ i Hezekia tamin’ ny tànan’ ny iraka ny taratasy ka novakiny, dia niakatra nankao an-tranon’ i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan’ i Jehovah.15 Ary Hezekia nivavaka teo anatrehan’ i Jehovah nanao hoe: Ry Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely ô, Izay mipetraka amin’ ny kerobima, Ianao dia Ianao irery ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin’ ny tany, fa Hianao no nanao ny lanitra sy ny tany.16 Atongilano ny sofinao, Jehovah ô, ka mihainoa; ahirato ny masonao, Jehovah ô, ka mijere, ary mandrenesa ny tenin’ i Sankeriba, izay nampitondrainy hihaika an’ Andriamanitra velona.17 Jehovah ô, marina ihany tokoa fa ireo mpanjakan’ i Asyria dia efa nandrava ny jentilisa sy ny taniny18 ary efa nanary ny andriamaniny tao anaty afo, satria tsy Andriamanitra ireny, fa asan’ ny tànan’ olona ihany, dia hazo sy vato; ka dia azony nosimbana.19 Koa ankehitriny, Jehovah Andriamanitray ô, mitaraina aminao aho, vonjeo izahay amin’ ny tànany, mba hahafantaran’ ny fanjakana rehetra ambonin’ ny tany fa Ianao dia Ianao irery ihany, Jehovah ô, no Andriamanitra.20 Ary Isaia, zanak’ i Amoza, dia naniraka hankany amin’ i Hezekia, nanao hoe: Izao no lazain’ i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Ilay fitarainana nataonao tamiko ny amin’ i Sankeriba, mpanjakan’ i Asyria, dia efa nohenoiko.
2 MPANJAKA 19 :14-20
ANDRIAMANITRA MAMELONA NY MPANOMPONY
1-Mampiorina ny finoan’ny mpanompony ny Tompo
Manatona sy manakaiky ny mpanompony Andriamanitra sady miara-monina Aminy . Ao an-tranon’ Andriamanitra no velarin’i Hezekia eo anatrehany ny taratasin’i Sankeriba Asyriana fahavalo (and14). Miasa ary mijery sy mihaino ny Tompo (and 14 , 16) .Manongilan-tsofina mihaino sy mijery ary mahita ny zava-mihatra amin’ny fireneny sy ny vahoakany manontolo Izy .
2-Mihaino sy mamonjy ny mpanompony ny Tompo
Omen’ny Tompo hery ny mpanjaka Hezekia hanatona Azy ao an-tranony , hamelatra eo anatrehany ny fihantsiana ady ataon’ny fahavalon’Israely sy ny olana mianjady aminy sy ny fireneny . Manatona sy mivavaka amin’ny fitarainana ary mametraka ny adiny amin’i Jehovah ao an-tranony ny mpanjaka . Maniraka ny mpaminany Isaia i Jehovah hanambara amin’i Hezekia mpanjaka fa efa nohenoiny ny vavaka nataony (and 20). Aza mahafoy ny fihaonana amin’ny Tompo ao an-tranony.
Ahoana no fampiharanao ny hoe : tranon’i Jehovah, toerana ihainoan’ny Tompo ny mpanompony sy ny vahoakany ?
Mofon'aina - TALATA 17…